General – Page2– Myanmar Photo News
78 years old Dhamma Yone monastery Sayar Taw Funeral Ceremony
ဓမ္မာရုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တ သုစိတ္တ သက်တော်(၇၈) ဝါတော်(၅၇) ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူခြင်းအခမ်းနား Source ; Facebook
June 4, 2018 myanmarphnews General, Local, News
Overload container truck crashed at the bridge over Shwe Pan Chaung River
ကုန်အပြည့်တင်ဆောင်လာသည့်တွဲကား ရွှေပန်းပင်ချောင်း ရေကျော်တံတားအတွင်း ကျွံကျ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့သစ်မြို့နယ်၊ တောင်တွင်းကြီး-နတ်မောက်သွားကားလမ်းပေါ်ရှိ ရွှေပန်းပင်ချောင်း ရေကျော်တံတားတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ကုန်အပြည့်တင်ဆောင်လာသည့် တွဲကားတစီး ကျွံကျပြီး ယာဉ်အသွားအလာပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြို့သစ်မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။ မြို့သစ်မြို့နယ်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့ ည ၇ […]
May 31, 2018 myanmarphnews General
Views after storm in Napali beach and Than Twal
မုန်တိုင်းအပြီးငပလီကမ်းခြေနဲ့ သံတွဲမြို့ မြင်ကွင်းတချို့ မနေ့ညက သံတွဲမြို့ကို အဖျားခတ်သွားတဲ့မုန်တိုင်းဟာ ၂၀၁၇ တုန်းက တည့်တည့်ဝင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ မာရုဿာမုန်တိုင်းထက် ပိုပြင်းထန်ခဲ့ပါ တယ်။ အပင်တွေလဲတာ၊ အကိုင်းကျိုးတာ၊ ဆိုင်းပုတ်တွေလဲတာလောက်ကလွဲရင် ကြီးကြီးမားမားပျက်စီးဆုံးရှုံးတယ်လို့ မကြားရပါ။ ဒီမနက်မှာ ငပလီကမ်းခြေမှာ လေခပ်ပြင်းပြင်းတိုက်နေဆဲဖြစ်ပြီး သံတွဲမြို့ပေါ်မှာတော့ လေပြေလောက်ပဲ တိုက်နေပါတယ်။ မိုးအုံ့နေပါတယ်။မုန်တိုင်းအပြီးငပလီကမ်းခြေနဲ့ သံတွဲမြို့ မြင်ကွင်းတချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ တယ်။ Source […]
May 31, 2018 myanmarphnews General, Local, News
Duran Eating Festival in Kayin State
Duran festival is held at Lauk Kai Kyar village monetary on 12 May 8:00 AM to 11:00 AM. In the festival, all the visitors were treated with Duran with buffet […]
May 12, 2018 May 24, 2018 myanmarphnews General
Air Force F7 Fighter Crash-Lands
တောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှ လေ့ကျင့်ပျံသန်းမှုဆောင်ရွက်နေသော အက်ဖ် – ၇ လေယာဉ်တစ်စီးသည် ဧပြီလ ၃ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် လေယာဉ်ကွင်း၏ အနောက်ဘက် ၃ မိုင်ခန့်အကွာ အမြင့်မီတာ ၅၀၀ ခန့် အရောက်၌ စက်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ပျက်ကျသွားကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ အဆိုပါ လေယာဉ်ပျက်ကျရာနေရာသို့တောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်များက […]
April 3, 2018 April 3, 2018 myanmarphnews General, Local, News, Photo
Welcoming ceremony for Myanmar’s new president at president house
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ==================================== နေပြည်တော် မတ် ၃၀ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်အား ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီးဒေါ်ချိုချိုတို့သည် သမ္မတအိမ်တော် သို့ရောက်ရှိလာရာ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဇနီးဒေါ်ခင်သက်ဌေးတို့က ကြိုဆို နှုတ်ဆက်သည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် […]
March 30, 2018 myanmarphnews General, Local, News
Mon Traditional Novitiation Ceremony at Shwedagon Pagoda
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က မွန်ရိုးရာ ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲ ယနေ့မြင်ကွင်း ================================================== မွန်ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အညီ ရှင်လောင်းလှည့်လည်ပွဲကို ယနေ့ ညနေပိုင်းက ရွှေတိဂုံဘုရား ရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ Source ; Facebook
March 28, 2018 myanmarphnews General, Local, News
Mrs. Myanmar 2018
Mrs. Myanmar 2018 is hold at Taw Win Garden Hotel on 15 March . It is orgazinated by Miss Goldenland Myanmar Organization. Miss Goldenland Myanmar Organization မှ Women Empowerment Program […]
March 16, 2018 March 16, 2018 myanmarphnews General
Samsung Galaxy s9/ s9+ ကုန်ပစ္စည်းသစ် မိတ်ဆက်ပွဲတွင် အပြိုင်အဆိုင်လှနေကြသော အေးမြတ်သူ၊ ဖွေးဖွေး၊ အေးသောင်း၊ ပန်းရောင်ချယ်တို့၏ ပုံရိပ်လေးများ
Source ; Facebook
March 7, 2018 myanmarphnews General
Accident crash happened near at Aung Myae Thar Zan Township, Mandalay , Corner of 80 & 12 Street on6March 11:00 AM
မန္တလေးမြို့၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊လမ်း ၈၀နှင့်၁၂လမ်းထောင့်တွင် မတ်လ ၆ ရက်၊နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်မတော်တဆတိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ရာ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့သည်။ Source ; Pyi Myanmar Journal
March 6, 2018 March 6, 2018 myanmarphnews Crime, General, Local, News